Tsy hita maso sy Peelable Silk Fibroin Film - China Simatech
Antsoy Us: +86 0512-62756585
Silk Fibroin vahaolana
Mety levona Lyophilized Silk Fibroin
Tsy hita maso sy Peelable Silk Fibroin Film
Ao amin'ny fiforonana Situ Silk Fibroin Gel Kits
Silk Fibroin manify
News nomen'ny Simatech
Ity vokatra dia fotsy, viscous vahaolana izay azo nohosorana mora foana eo amin'ny faritra, maina haingana sy hiverina ho any an-lasitike, fahari-maharitra sy mangarahara sosona. Tsy misy koa ny fitsaboana ilaina. Raha vao niforona tamin'ny hoditra, dia mety hiasa ho toy ny tsy hita maso, nefa peelable saron-tava izay miaro ny hoditra avy any UV mampiharihary, tandremo ny hamandoana, hamonjy mavesatra entana ilaina mavitrika sy hampihenana ny ketrona noho ny hoditra-fananana toy ny mekanika.
Ny landy voajanahary fibroin sy ny ankamaroan'ny mpiasa hafa ampiasaina amin'ny vokatra dia izay ampiasaina amin'ny fitsaboana ny vokatra, dia toy izany no biocompatible, azo antoka sy vokarina sy ny toetra-maso araka ny FDA sy CFDA fenitra ny fanafody excipients. Ny vokatra dia azo ampiasaina ho toy ny fitaovana fototra ho an'ny formulating bebe kokoa vokatra samihafa ao amin'ny faritra toy ny skincare fanatsarana tarehy, loha sy transdermal fanaterana zava-mahadomelina, ka manimba fanasitranana, sns
P arameter sy ny fananana
Major Components: molekiolan'ny lanjany lehibe landy fibroin proteinina
Bika Aman 'endrika: fotsy, manjavozavo, semi-colloidal vahaolana
Viscosity: 1500-4000 Pa.s
(1) Ny vokatra dia ahitana ny landy fibroin (singa lehibe) sy ny tarehy excipients (singa kely), izay haingana dia afaka mamorona ny tsy hita maso sy peelable horonantsary eo amin'ny hoditra eo rivotra-paharitry ary nanasitrana. Noho ny mazava ho ampy singa, sy ny milina biocompatibility hery izay Mpaka olombelona hoditra, ny horonan-tsary niforona dia afaka mitoetra ho akaiky firaiketam ny hoditra mandritra ny fotoana lava be tsy misy fahasorenana sy ny fihetseham-po vahiny-body. Afaka mora Peel na hanasa azy ho eo amin'ny hoditra tsy misy fahasarotana sy ny fanaintainana.
(2) Ny lehibe molekiolan'ny lanjan'ny landy fibroin dia vaovao biodegradable zavatra izay efa hita ho tsy immunogenic sady tsy misy poizina ny biby fampianarana ary izay vao haingana no voatanisa toy ny anankiray amin'ny lehibe foto-kevitra ao amin'ny 2017 National Key Research sy ny Fampandrosoana fandaharam-Shina miaraka collagen fitaovana. Ny ara-nofo fikarakarana ny landy fibroin maitso, tsy mampiasa zavatra simika misy poizina sy ny fitaovana manokana. Ny fifehezan '18 voajanahary asidra amine ny landy fibroin Mandray soa koa Functional encapsulation sy stabilization ny bioactive molekiola.
(3) Ny tahirin-kevitra ny vokatra dia nampiseho fa afaka mandray hazavana UV, dia toy izany no nanome asa ny sunscreen rehefa eo amin'ny hoditra izy io no ampiasaina.
(4) Ny vokatra ihany koa ny mampiseho tsara breathability sy ny fisorohana ny rano very, dia toy izany no vokatry ny fananana sy ny aina moisturizing fihetseham-po, rehefa ampiharina eo amin'ny hoditra.
Previous: Silk Fibroin Nano / Microspheres
Lasitike faharoa faharoa Skin Skin
Ary tsy hita maso Peelable Silk Fibroin Film
nateraka indray Silk Fibroin Film
Nateraka indray Silk Fibroin proteinina Film
Nateraka indray Silk proteinina Film
Silk Fibroin Film
Silk Fibroin proteinina Film
Silk proteinina Film